नेपोलियन - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
मिठाई14 मिनेट8 व्यक्ति
आज म तपाइँलाई एक मिठाई ल्याएको छु कि, म पहिले नै यसको पूर्वानुमान गर्दैछु, एक हुनेछ ग्यारेन्टी सफलता। मैले यो धेरै पटक गरेको छु, विभिन्न अवसरहरूको लागि, र मानिसहरू यो कसरी धनी छन् भनेर छक्क पर्छन्।
यो शानदार छ किनकि यसले बोक्छ धेरै साधारण सामग्री, सस्तो, फेला पार्न सजिलो र सबै भन्दा राम्रो, यो बनाउन १ about मिनेट लाग्छ र अझ राम्रो, यो राम्रोसँग अग्रिम तयारी गर्न सकिन्छ !!
मुख्य घटक हो गाढा दुध, त्यसोभए तपाइँ कती “मीठो” हुनुहुन्छ भन्नेमा भर पर्दै तपाइँ बढी वा कम रकम थप्न सक्नुहुन्छ, तर मँ तपाईंलाई पहिले नै भन्दछु कि यसले केहि पनि लुक्दैन। म मीठो भन्दा धेरै नुनिलो हुँ, र मलाई यो मन पर्छ मिठाई त्यसोभए अब कुनै कुरा छैन, हामी काममा लागौं !!
कन्डन्स्ड दुधबाट बनेको एक सजिलो र सस्तो मिठाई।
खाना पकाउने समय: 9M
कुल समय: 14M
7 स्तर चम्मच (सूप आकार) कोर्नस्टार्च
१ चम्मच भेनिला चिनी (वैकल्पिक, यदि तपाईंसँग छैन भने, केहि पनि हुँदैन)
200 मिलीलीटर ह्विपिङ क्रीम (35% मिलीग्राम)।
300 - 400 ग्राम कन्डेन्स्ड दूध (तपाई कति मीठो हुनुहुन्छ भन्ने आधारमा) (नुस्खा हेर्नुहोस् यहाँ)
पफ पेस्ट्री प्रकारका कुकीहरू (तिनीहरू सबैभन्दा बाक्लो र कम मीठा हुन्छन्)।
ओखर वा क्रोकान्टी (वैकल्पिक)
हामीले गिलासमा दूध, मकै, चिनी, क्रीम र कन्डेन्स्ड मिल्क राख्छौं।
हामी सबै कुरा मिलाउँछौं Seconds सेकेन्ड, गति 5.
त्यसो भए हामी प्रोग्राम गर्दछौं 8 मिनेट, गति 4, तापमान 90º।
यी ८ मिनेट हामीले कोठाको तापक्रममा दूध खायौं वा फ्रिजबाट चिसो खायौं भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ।
बनावट बेचेमेल वा कस्टर्डको हुनुपर्छ, त्यसैले तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ कि जब यो चिसो हुन्छ यो अलि गाढा हुन्छ। यो क्रीमयुक्त मिठाई हो, तर तरल होइन।
मेरो चाल यो हो कि मैले यसलाई 8 वा9मिनेटमा प्रोग्राम गरे पनि, म खोजीमा छु र जब 90º बत्ती बल्छ, तब म एक मिनेटको लागि गणना गर्नेछु। म खोलेर हेर्छु । यदि तपाइँ यसलाई अत्यधिक तरल देख्नुहुन्छ भने, 1 थप मिनेट कार्यक्रम गर्नुहोस्।
यसलाई थोरै चिसो हुन दिनुहोस् र तापमान 60º मा कम गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले राख्यौं Seconds सेकेन्ड गतिमा।
र अब यो माउन्ट गर्ने समय हो। तपाईं ठुलो वा दुई साना सानो (तर लामो पनि) ठूलो कन्टेनर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मैले लगभग x 35 x २ cm सेन्टीमिटर ਮਾਪने आयताकार पाइरेक्स प्रयोग गरेको छु।
तपाईंले कुकीहरूको तहलाई तल राख्नुहुन्छ (तपाई कुकी तोड्न सक्नुहुन्छ र प्वालहरूमा टुक्राहरू राख्न सक्नुहुन्छ जहाँ पूरै फिट हुँदैन) र हामी यसलाई क्रीमको आधाले छोप्छौं।
हामी कुकीजको अर्को तह राख्छौं र हामी क्रीमको अर्को आधासँग छोप्छौं।
तपाईंले क्रिम हाल्दा सावधान हुनुहोस् किनभने यदि तपाईंले यसलाई ठूलो बलसँग खन्याउनुहुन्छ भने यसले कुकीहरूलाई विस्थापित गर्न वा तिनीहरूलाई तैराउन सक्छ। त्यसैले म सुझाव दिन्छु कि तपाई आफैंलाई लडलको साथ मद्दत गर्नुहोस् र यसलाई कुकीजको नजिक राख्नुहोस् र बिस्तारै बिस्तारै।
हामी यसलाई चिसो हुन दिन्छौं र हामी यसलाई चकलेट सेभिङ्स, ग्रेटेड चकलेट, कोको वा पाउडर गरिएको चकलेट, क्रोकान्टीले सजाउँछौं ... आउनुहोस्, तपाईलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा।
यदि तपाईं कोलेस्ट्रोल वा Kcal कम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले कम बोसो भएको पकाउने क्रीम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
थप जानकारी - आधारभूत नुस्खा: गाढा दूध
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, अण्डो असहिष्णु, १ 15 मिनेट भन्दा कम, Postres, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » Postres » नेपोलियन
इरेन, यो पाप हो, रमाइलो! र यो धेरै सजिलो छ ... अर्को चाँडै नै चाँडै बनाउने विधि। राम्रो फोटोहरू!
चुम्बनहरू र आनन्दित शनिबार
नमस्ते Piluka! धेरै धेरै धन्यबाद, यसको लागि साइन अप गर्नुहोस् किनकि यो अम्मल हो। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद। चुम्बन र राम्रो सप्ताहन्त।
सैन्ड्रा एमसी भन्यो
शुभ प्रभात ... म पिलुकासँग सहमत छु ... यो पाप हो! ठिक छ, हामी होईन भन्न, त्यसोभए ... आक्रमणमा! आउनुहोस् हेरौं कि म यो दिउँसो हराइरहेको तत्त्वहरू पाउन सक्छु र म भोली गर्नेछु ... उम्म, म पक्का छु कि तपाईंलाई यो घर मनपर्नेछ।
सैन्ड्रा एमसीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार स्यान्ड्रा, कती राम्रो छ कि तपाईं यसलाई यति चाँडै गर्न लाग्नुभएको छ। मलाई भन्नुहोस् यो कसरी फेर्छ र यदि तपाईंलाई यो मनपर्दछ, ठीक छ? यो मलाई मन पर्छ। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद।
नमस्ते, आइरेन, मलाई कुकी मिठो मन पर्छ, तर मलाई केही शंका छ, के दूध स्किम् गर्न सकिन्छ? र यसलाई आधा सामग्री र एकै पटक प्रयोग गरेर सानो बनाउन सकिन्छ? धेरै धेरै धन्यबाद र चुम्बनहरु ..... ..
नमस्ते रोसियो, यदि तपाइँ कुकिजको साथ मिठाईहरू मनपराउनुहुन्छ भने, यो तपाइँको मिठाई हो। म तपाईको शंकाको बारेमा भन्छु:
- दूध स्किम्ड गर्न सकिन्छ, हो, यसको स्वाद कम हुनेछ, तर यदि तपाईं पूरै दूध वा सम्पूर्ण गाढा दूध पिउन सक्नुहुन्न भने तपाईं दुबैलाई स्किम्ड दुधको लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ।
- पक्कै पनि तपाईं आधा रकम बनाउन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं थोरै हुनुहुन्छ भने, यो एक राम्रो विचार हो। समय फरक फरक हुन सक्छ, सायद आधा, तर मैले नुस्खामा राखेको उही चालको अनुसरण गर्नुहोस्: ध्यान दिनुहोस् कि जब º ०º साइन अप बत्तीहरू, यो seconds० सेकेन्ड वा १ मिनेट पकाउँदै छ, र स्थिरतामा हेर्नुहोस्। यो तिनीहरू कस्टर्ड भएको जस्तो हुनुपर्छ।
म आशा गर्दछु कि मैले तपाईंलाई मद्दत गरेको छु, यदि तपाईंसँग बढि प्रश्नहरू छन् भने, तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंलाई आवश्यक सबै सोध्नुहोस्।
शुभकामना र मलाई भन्नुहोस्! चुम्बनहरू।
फोटो राम्रो देखिन्छ ... तर ... पक्कै स्वाद… धेरै राम्रो छ। मलाई यो मनपर्दछ !!
म निश्चित रूपमा यसलाई प्रयास गर्छु। म तपाईंलाई यसको बारेमा भन्नेछु।
धन्यवाद !! र तपाईंको सप्ताहन्त राम्रो होस्!
नमस्ते डेल्फी, धेरै धेरै धन्यवाद। यो मिठाई हो जुन म मन पराउँछु र मेरा मानिसहरू पनि। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद र हामीलाई भन्नुहोस् यो तपाईंको लागि कसरी भयो। चुम्बनहरू र तपाईंलाई पनि राम्रो सप्ताहन्त।
नमस्कार इरेन, भर्खरै फोटो हेरेर, यसले मेरो मुखमा पानी बनाउँदछ, म कल्पना गर्छु यो कति राम्रो हुनुपर्दछ, जब म यो गर्छु, म तपाईंलाई भन्नेछु कि यो कसरी भयो, जब म तापक्रम सेट हुन्छु º ०º सम्म यो बत्तीमा फर्कन्छ, तर तपाइँले कसरी बुझ्नुभयो भनेर मैले बुझ्दिन जब तपाईं बत्ती सकृय पार्नुहुन्छ तपाईंसँग एक मिनेट हुन्छ धन्यवाद
नेपोलियन केक भन्यो
यो स्वादिष्ट हुनुपर्दछ, यो सेरादुरासँग मिल्दोजुल्दो छ (पोर्तुगाली मिठाई)
केक नेपोलियनलाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो एन्टोनिया, तपाईको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यबाद। म तपाईंको लागि º ०º कुरा स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्दैछु: नुस्खामा म भन्छु कि यसले or ० at मा or वा minutes मिनेट पकाउँछ, तर यो कसरी दुधको प्रकारमा निर्भर गर्दछ, हामीले यसमा थपेको तापमान, आदि। धेरै गाढा, हामीले यसमा नजर राख्नु पर्छ। त्यसो भए, जब यो º ०º सम्म पुगेको छ (उदाहरणका लागि हाम्रो मेशिनमा still मिनेट मात्र बाँकी थियो, जुन हामीले प्रोग्राम गरेका थियौं), हामीले यसलाई केवल १ मिनेट पकाउन दियौं, हामीले यसलाई रोक्‍यौं र यसलाई खोल्नको लागि हामीले त्यसलाई खोल्यौं। छ यदि यो धेरै तरल छ भने हामी sec० सेकेन्ड -१ मिनेट बढी राख्छौं। र यति मा यो हाम्रो रुचि छ। याद गर्नुहोस् कि यो कस्टर्ड वा तरल बाचलेल जस्तै हुनुपर्दछ।
म आशा गर्छु कि मैले तपाईंलाई सहयोग गरेको छु, यदि हैन भने, मलाई भन्नुहोस्।
नमस्ते इरेन मसँग पहिले नै मेरो नेपोलियन छ, किनकि तपाईं भन्छन कि यो एकदमै राम्रो छ, मलाई क्रीम एकदमै मनपर्‍यो, यो अधिक छ, मैले गिलास सफा छाडिदिएँ hahaaaaa, मेरो ब्लगहरू मार्फत जानुहोस् र तपाईं देख्नुहुनेछ कि म कति शान्त छु
चुम्बन र तिमीलाई चाँडै भेट्छु *******
हेलो एन्टोनिया, मैले भर्खर तपाईको नेपोलियन देखेको थिएँ र ऊ एकदम राम्रो छ, बधाई छ !! म तपाईंलाई धेरै मन पराउँछु खुशी छु ... म गिलास पनि बगाल गर्छु ... क्रीम तातो छ, तर यो धेरै स्वादिष्ट छ ...।
नमस्कार इरेन, यो नुस्खाका लागि धन्यवाद, यो महान हुनुपर्दछ, मलाई तपाईंले राख्नु भएको सबै व्यञ्जनहरू मनपर्दछ, विशेष गरी डेसर्टहरू, म एक मीठो दाँत हाहााहा !!!!!!!!!! लोहारेसँग इसाले एक चुम्बन छ-
MMMM, यो पिन्ट छ, कि आज दिउँसो म यो गर्छु! अर्को दिन मैले पफ पेस्ट्री केक, क्रीम र क्रीम बनाएँ र यसको लागि मर्नुपर्‍यो, हाहाहा, सबैजना यसलाई मन पराउँथे। म तपाईंलाई बधाई दिन चाहन्छु किनभने तपाईं महान हुनुहुन्छ, मलाई सबैभन्दा धेरै बनाइएको व्यंजनहरू र म विश्वास गर्छु, तिनीहरू तपाईंकै हुन्। कुनै श doubt्का बिना, यो मेरो मुख्य पृष्ठ हो जब म नुस्खा हेर्न जान्छु। ' म तपाईंलाई कसरी बाहिर काम बताउँछु !!
कति राम्रो इसाबेल! हामीलाई दैनिक अनुसरण गर्न को लागी धेरै धेरै धन्यबाद। कस्तो भ्रम है कि तपाईं आज दिउँसो गर्न लाग्नुहुन्छ, कृपया मलाई भन्नुहोस् यो कसरी हुन्छ र यदि तपाईंलाई यो मनपर्दछ, ठीक छ? चुम्बन
इरेन केहि फे - मलाई लाग्छ! यो कुकिजहरू फ्लोटिंग भइरहेको छ भन्ने लाग्छ, मलाई लाग्छ कि यो धेरै तरल हो र मैले यसलाई अझै छोडिराखेको छु, मलाई थाहा छैन यदि यो पूर्ण रूपमा चिसो भयो भने यसले घुमाउनेछ। मलाई यो त्रुटि कर्नरस्टार्कमा थियो, मैले यसलाई large ठुलो तर नचलाएको ठूलो चम्मचमा फ्याँकिएको छ, यदि हैन, तिमीलाई के लाग्छ? केटी कति सजिलो देखिन्थ्यो र हेर्नुपर्दछ ... कस्तो लाजमर्दो कुरा, तर राम्रो छ यदि हामी यसलाई पनि खान सक्दछौं, LOL ।
ओह ओह इसाबेल कस्तो लाजमर्दो छ। हेरौं, यदि कुकिजहरु तैरिएमा यो धेरै कारणका लागि हुन सक्छ:
- किनकि क्रीम अत्यधिक तातो थियो
- किनकि क्रीम ठूलो शक्तिसँग खन्याइएको छ र कुकीहरू तिनीहरूको स्थानबाट सर्छन्
- किनभने यो धेरै तरल छ। शीर्षमा कर्नस्टार्चको table टेबलस्पून थप्न महत्त्वपूर्ण छ, तर यो गम्भीर गल्ती पनि होइन। हुनसक्छ तपाईंसँग धेरै तरल पदार्थ छ किनकि तपाईंसँग 6º मा पर्याप्त समय थिएन।
जे भए पनि, केहि पनि हुदैन किनकि कुकीज फ्लोट भएको छ। तपाईले देख्नुहुनेछ कि यसको स्वाद कति स्वादिष्ट छ। चिसो हुँदा यो गाढा हुन्छ, त्यसैले चिन्ता नलिनुहोस्। मलाई इमान्दारीपूर्वक सोच्नुहोस् कि यो राम्रो छ यदि यो धेरै बाक्लो भन्दा पनि बग्ने छ।
र अर्को कुरा, कहिलेकाँही मलाई यो पनि भयो कि कुकिज फ्लोट हुन्छ र एउटा लेयरले अर्को भेट्छ र मलाई किन थाहा हुँदैन। हुनसक्छ यो कुकी ब्रान्ड वा मिल्क ब्रान्डको कारणले हो ... मलाई थाहा छैन ...
जे भए पनि, तपाइँ किकको पोइन्टमा ट्रिक पाउनुहुनेछ ताकि यो तपाइँलाई मनपर्दछ।
तपाईं देख्नुहुनेछ कति रमाइलो छ !!
चुम्बनहरू र यो गरेकोमा र हामीलाई भन्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।
आइरिनसँग 90 ० डायल भए पछि उनीसँग लगभग दुई मिनेट वा सोभन्दा बढी समय थियो, र यो अझै तरल थियो, मलाई लाग्छ कि उनीमा कर्नस्टार्चको अभाव छ। कुकिजको ब्रान्ड कुतारा हो, र मैले source० गार्दोमा पर्खेर त्यसलाई स्रोतमा खन्याइदिएँ। र मैले यो एउटा भर्या onमा गरें यदि त्यो ... त्यस्तो केही थिएन जुन मेरो दिन होइन, हाहाहा। जे भए पनि हामी उनीहरूलाई कस्टर्ड जस्ता खाँदैछौं र उनीहरू धेरै राम्रो छन्!
यो कस्तो देखिन्छ राम्रो हुनुपर्दछ, आज म हराइरहेको सामग्रीहरू किन्छु र म काममा लाग्छु। म तिमीलाई भन्छु यो कसरी भयो।
धन्यबाद यी महान व्यंजनहरु को लागी।
नमस्ते मारीलो, कसरी यति चाँडो तपाईले यति चाँडो खुशी हुनुभयो तपाई हामीलाई भन्नुहुन्छ, हह? हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद।
यो मिठाई अति उत्तम छ, म यो सिफारिस गर्दछु, किनकि यो बनाउन को लागी धेरै सजिलो छ, र यो स्वादिष्ट छ।
तपाईका यी उत्कृष्ट रेसिपीहरूको लागि तपाईलाई धन्यवाद।
इसाबेल: त्यसो हो, समस्या कोर्नस्टार्च हुनुपर्‍यो। तर अर्को पटक यो तपाईलाई हुने बित्तिकै तपाईले बढि तरल पदार्थ पाउनु भएको छ भने तपाईले एक ठूलो चम्चा कर्नस्टार्च थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई फेरि minute ० at मा १ मिनेट, स्पीड º को लागी राख्नु भयो र त्यस्तै भयो। तर हे, म तपाईलाई स्वाद मन पराउँछु खुशी छु। अर्को पटक तपाईं पक्कै यो कढ़ाई हुनेछ !!
आशा छ भन्यो
किनकि यसमा कर्नस्टार्च थिएन, मैले दहीका दुईवटा खामहरू हाले र यो उत्तम थियो।
आशामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ओहो एस्पेरन्जा, कत्ति राम्रो, दहीको साथ कस्तो ठुलो चाल, यो मलाई कहिले हुने थिएन, यसलाई साझा गरेकोमा धन्यवाद! हामी तपाईं बिना के गर्छौं ...
म तपाईंलाई डेजर्टमा बधाई दिन चाहन्छु, मैले हिजो यो गरें र यो सफल भयो, सबैले ट्रिप गरे !!! काम गर्ने र धेरै समय नहुने मानिसहरूलाई यो ब्लगको सहयोगको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद !!!
धेरै धेरै धन्यबाद, मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि तपाईंलाई यो धेरै मनपर्‍यो ... मैले तपाईंलाई पहिल्यै भनिसकेको छु कि यो एकदम सुरक्षित मिठाई हो। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद! चुम्बन
नमस्ते, यो धेरै राम्रो देखिन्छ र म यो साताको अन्तमा मेरो सासुको जन्मदिनको लागि गर्दैछु, मलाई आशा छ यो राम्रो हुन्छ ... म तपाईंलाई यो भन्न चाहान्छु कि यदि हामीले कफि वा चकलेटको साथ कुकिज थोरै डुबायौं भने, तिनीहरू ठाउँमा रहन सक्छन र तपाईं क्रीमको लेयर राख्नुहुँदा सर्दैनन् ... म यसलाई प्रयास गर्छु र तपाईंलाई बताउँछु।
अवश्य पनि, मैले अहिलेसम्म धेरै व्यंजनहरू बनाइसकेको छु, जस्तै गाजर र बदाम केक, माथिको जामको साथ चकलेट केक, पेस्ट्री क्रीमको साथ स्याउ केक र ती सबै सफल भएका छन्, तपाईंको विचारहरूको लागि धन्यवाद र मँ भन्छु तपाईं यसको बारेमा।
कत्ति राम्रो तपाईं यस सप्ताहन्त मा यो गर्न जाँदैछन्। मलाई थाहा छैन कुकिजलाई भिजेको नतीजा के हुनेछ, किनकि हामीले थपेको नेपोलियन क्रीम तातो छ, र यसले कुकीजलाई भिजाउँछ र ओछ्याउँदछ ... यदि तपाईंले तिनीहरूलाई भिजाउनु भयो भने यो तरलको अधिक हो र ती विच्छेद गर्न सक्दछन्। , क्रुम्बल वा फ्लोट ... तर यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ कि तपाइँ यसलाई कसरी जान्छ भनेर एक सानो परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ ... शायद तपाइँले स्वादिष्ट नेपोलियनको नयाँ संस्करण सिर्जना गर्नुहुनेछ !!
यदि तपाईले फेला पार्नुभयो कि कुकिज डिपिंग राम्रोसँग पाउँदैन भने तपाई यसलाई माथि चकलेट र थोरै क्यापुचिनो प्रकारको कफी पाउडर वा त्यस्तै केहि छर्कनु हुन्छ।
तपाईं यसको बारेमा हामीलाई भन्नुहुनेछ !!
मैले यो साताको अन्त्यमा गरे किनभने मेरो परिवारको जन्मदिन थियो र…। महान !!!
त्यो यदि ... समान कुरा मलाई इसाबेलको रूपमा भयो। मैले अधिक मिनेटका लागि यसलाई º ०º मा राखें किनकि यो मोटा थिएन र मलाई लाग्छ कि यो कोर्नस्टार्चको कारणले हो। मैले नुस्खामा corn स्तरको टेबलस्पून कर्नस्टार्च थपेँ। मलाई थाहा छैन, कुनै मार्ग थिएन जुन यो बढि मोटो हुने थियो। कुकिज ... तिनीहरूले मलाई पनि फ्लोट गरे। कुनै बाटो थिएन।
कुरा त्यो अझै पनी छ ...। त्यहाँ केहि पनि बाँकी थिएन !!! उहाँ विजयी हुनुहोस्, हामी जानुहोस्!
मैले यसलाई कोलाकाओ, चकलेट विचर र अखरोटको साथ छिडकें। स्वादिष्ट !!
म फेरि त्यसो गर्न जाँदैछु किनकि चाँडै मेरो अर्को जन्मदिन छ !! म थोरै थप कर्नस्टार्क थप्न कोसिस गर्दछु। तपाई कति सिफारिस गर्नुहुन्छ? चम्चा पूर्ण र फ्लैट छैन?
नुस्खा इरेन को लागी धन्यवाद !!!
तपाईलाई मन परेकोमा म खुसी छु। जे भए पनि, जब कन्स्टार्च तपाईंलाई हुन्छ, तपाईं जहिले पनि यो क्षणमा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र केहि थप मिनेटको लागि º ०º मा थोरै थप कर्नस्टार्च र पुनः प्रोग्राम थप्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि यो हामी प्रयोग गर्ने दुध र गाढा दूधको ब्रान्डमा निर्भर गर्दछ। र कुकिजसँग उस्तै ... यसले कुकीहरूलाई धेरै नरम छोड्न पनि मद्दत गर्दछ, क्रीमको बिरूद्ध उनीहरूलाई थिच्दैन ... तर यो सत्य हो कि कहिलेकाँही यो हुन्छ र हामीलाई यो राम्रोसँग थाहा छैन कि यो किन हो।
यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई पूर्ण थ्रो गर्नुहोस्, र हामीलाई भन्नुहोस् यो कसरी जान्छ। र यदि त्यसो हो भने, म यसलाई तुरुन्तै पकाउने विधिमा परिवर्तन गर्दछु।
धन्यबाद! ठूलो चुम्बन।
यदि तपाईं दहीको एक खाम पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने, यसले धेरै देखाउँदछ र धनी पनि छ। मलाई आशा छ यो चालले तपाईंलाई काममा पुर्याउछ।
फानी (Gran Canaria) भन्यो
मैले यो नुस्खा र एमएमएमएमएमएम बनाएको छु, दोहोर्‍याउन, जाऔं… निश्चित रूपमा। मैले directly हिप भएका टेबलस्पूनहरू सिधा हालेको छु र मोटाई पूर्ण भएको छ, त्यसैले म बुझ्छु कि अन्य तरल भएको छ किनकि उनीहरूले लेबल टेबलस्पून राखेका छन्।
तपाईको व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद। तपाइँले मेरो थर्मोमिक्सको फाइदा लिन मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ।
क्यानरी टापुबाट चियर्स।
Fani (Gran Canaria) लाई जवाफ दिनुहोस्
नुस्खा बनाउनु भएकोमा धन्यवाद। म धेरै खुसी छु कि तपाईले यति राम्रो देख्नु भएको छ र तपाईंलाई यो धेरै नै मन परेको छ। ठीक छ, he heaped टेबलस्पून को बारे मा थाहा, हामी यो समाधान भएको छ। म यसलाई अहिले नुमाइमा परिवर्तन गर्न जाँदैछु। धन्यवाद!
नमस्ते, म यो मिठाई बनाउन मन पराउँछु किनभने यो राम्रो देखिन्छ। समस्या यो छ कि मसँग थर्मोमिक्स २१ छ र मलाई तापक्रम र समयहरू कसरी अनुकूल बनाउने भनेर थाहा छैन। के तपाई मलाई अलि मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ? मुरी मुरी धन्यवाद
एन्जलाइनलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार एन्जलाईन, T21 को लागी यो करीव approximately मिनेट, गति,, तापमान º ० डिग्री हुनेछ। जे भए पनि, निश्चित गर्नुहोस् कि जब यो º ०० सम्म पुग्छ, यो एक मिनेट भन्दा बढि होइन, ठीक छ? र यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि तपाइँ धेरै तरल भएको छ भने, प्रोग्राम १ थप मिनेट। यदि यो अझै तरल छ भने, केहि बढि कर्नस्टार्च र प्रोग्रामहरू थप गर्नुहोस् १-२ अधिक मिनेटहरू र, यदि यो धेरै बाक्लो छ भने, दूधको छप्पर थप्नुहोस् र केही सेकेन्डको लागि वेग7मा चलाउनुहोस्। मलाई आशा छ मैले सहयोग गरेको छु। शुभकामना!
नमस्कार इरेन! मैले यो मिठाइ सप्ताहन्तको लागि तयार गर्ने बारेमा सोचेको छु, जुन मैले पढें र यस्तो देखि कि यो स्वादिष्ट हुनुपर्दछ, तर के तपाई मलाई टेबलस्पूनको सट्टा कर्नस्टार्चको तौल बताउन सक्नुहुन्छ? हाम्रो लागि पकाउन सजिलो बनाउनको लागि धन्यवाद।
कान्छीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते कोन्ची, सत्य यो हो कि मैले यसलाई कहिले पनि तौलिन सकेन किनभने मूल विधि एक परम्परागत तरिकामा बनाइएको थियो र मैले यसलाई थर्मोमिक्समा अनुकूलित गरें, त्यसैले मैले कहिल्यै कर्नस्टार्च तौलको छैन। अर्को पटक जब म यो गर्छु म यसको तौल लिन्छु, तर जे भए पनि कसैले यसलाई पहिले गर्छ भने he हिपी table चम्मच तौल र हामीलाई कति तौल बताउँछ। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद।
म यो बिहान सोच्दछु, र पछि हामी यो खाँदैनौं, यो एकदम राम्रो थियो, म फेरि यो बनाउनेछु, धेरै धेरै प्राप्त गर्नका लागि धन्यवाद।
नमस्ते पाको, कस्तो खुशी भयो यो तपाईंको लागि राम्रोसँग! म खुशी छु। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा र हामीलाई तपाईंको अनुभवको बारेमा भन्नु भएकोमा धन्यवाद।
नमस्कार फेरि इरेन !!
म सप्ताहन्तको लागि फेरि यो मिठाई बनाउन जाँदैछु कि मेरो अर्को जन्मदिन छ र अर्को पटक मैले तपाईंलाई अघि भनें, म धेरै सफल छु !!! यस पटक म तिनीहरूलाई कसरी पूर्ण रूपमा फाँसी दिनेछु। मा तिमीलाई भन्छु।
मलाई थोरै समस्या छ ... हामी उनको जन्मदिन एक ग्रामीण घरमा देख्छौं जुन करिब १ घण्टा टाढा छ। यदि मैले यसलाई लग्यो भने ... यो चकनाचूर हुनेछ। त्यसोभए, मैले क्रीमलाई आफूसँगै लैजान्छु र त्यहाँ माउन्ट गर्ने बारेमा सोचें ताकि यसले मलाई नष्ट नपारोस्।
नकारात्मक पक्ष भनेको यो चिसो आउनेछ र मलाई थाहा छैन के त्यहाँ कुनै समस्या छ कि छैन। के तपाईले कहिले यो शान्त हुनको लागि कुर्नुभयो?
नमस्ते लौरा, कत्ति राम्रो छ कि तपाइँ फेरि यो गर्न जाँदै हुनुहुन्छ!
एक धेरै राम्रो विचार heaped टेबलस्पून जोड्न को लागी, यो पक्कै तपाइँ को लागी राम्रो बाहिर काम गर्दछ।
मेरो सल्लाह यो छ कि तपाइँ यो सामान्य रूपमा गर्नुहोस् र यसलाई आफु ग्रामीण घरमा लैजानुहुन्छ र जब तपाइँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। तपाइँ कस्तो प्रकारको मोल्ड प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईंले ध्यान दिएर लिनुभयो भने तपाईंलाई कुनै समस्या हुने छैन। वास्तवमा, मैले यसलाई कारमा धेरै चोटि ट्रान्सपोर्ट गरेको छु र कहिले यस्तो भएको छैन। म यसलाई राम्रोसँग ट्रान्सपोर्ट गर्न मसँग दुईवटा सानो टुपरहरू प्रयोग गर्दछु (कडा र यसको ढक्कनको साथ)। त्यो हो, सबै एक कन्टेनरमा राख्नुको सट्टा, म यसलाई दुई सानामा राख्छु, तर यस तरीकाले म यो निश्चित गर्छु कि यो सुरक्षित रूपमा आउँछ।
यो चिसो क्रीमको साथ यसलाई आरोहण गर्नु भन्दा राम्रो छ, किनभने कर्नस्टार्चले यसको प्रभाव पाइसकेको छ र यसलाई माउन्ट गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ किनकि क्रीम धेरै मोटो हुनेछ, त्यसैले सम्मेलन र प्रस्तुतीकरण दुवै सही हुँदैन।
मैले यो फेरि गर्‍यो तर चम्चाको साथ राम्रो ढंगले र…। कुल सफलता !!!! म उसलाई ग्रामीण घरमा लगें र एकाएक स्टपमा मैले उनलाई राम्रो विग्लै दिएँ तर उनी सनिटो सानिटो आइपुगे। केहि पनि बाँकी थिएन, यो केही सेकेन्डमा उड्यो।
मँ अधिक समय यो योजना बनाउँछु जब म जन्मदिन छ तर यो एक सफलता हो र यसले थोरै समय लिन्छ ...
उम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म मम्म्म्म… .. म फेरि त्यसो गर्न अगाडि छु। hehehehe ...
पुनः धन्यवाद !!!
यदि तपाईलाई धेरै धनी थाहा छ ??? म सबै कान हुँ ...
तर कति राम्रो !! तपाईले मलाई कस्तो आनन्द दिनुहुन्छ। यदि यो निश्चित सफलताको मिठाई हो। ठिक छ, केहि छैन, यो आवश्यक पटक पटक पटक दोहोर्याउन। धन्यबाद तपाईंलाई!
mmmmmmmmmmmmmm !!!!!!!!!!!! यो महान् छ जस्तो लाग्छ
पक्कीलाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईंसँग यति धेरै कन्डेन्स्ड दुध छैन भने तपाईं 150 ग्राम थप्न सक्नुहुन्छ
मलाई आशा छ
नमस्ते पाकी, मैले कम्तिमा २०० ग्रु थपेको छु, यदि तपाईंले १ 200० जोड्नुभयो भने तपाईंले कम्तिमा २ देखि large ठूला ठूला चम्चा चिनी थप्नु पर्छ (कति मिठो रहेछ भन्नेमा निर्भर गर्दै)। र मलाई भन
तपाईको सल्लाहका लागि धेरै धेरै धन्यवाद, तर म थोरै तरल भएको छु, मलाई किन थाहा छैन?
मैले यो सबै ठीक गरे
नमस्ते पाकी, सायद यो किनभने यसले कम कन्डेन्स्ड दुध छ (जसले यसलाई मोटाई पनि दिन्छ)। के तपाईंले corn हिपेड टेबलस्पून कर्नस्टार्च थपेको छ?
होईन, म भोली गर्छु
नमस्कार इरेन, म तपाईंको पृष्ठको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि मैले तपाईंको धेरै भन्दा पहिले नै बनाउने विधिहरू बनाइसकेका छु र मलाई धेरै प्रोत्साहन दिइएको छ।
यो मिठाई कूल सफलता भएको छ, केहि बाँकी छैन।
नमस्ते सिल्भिया, हामीलाई अनुसरण गर्न धेरै धेरै धन्यबाद। मलाई खुशी छ तपाईंले नेपोलियन मन पराउनुभयो ... मेरो लागि यो पक्का सफलता हो। अंगालो।
के तपाईंलाई थाहा छ म कहाँ चिनी रहित कन्डेन्स्ड दुध पाउन सक्छु, मेरो श्रीमान् मधुमेह रोगी हो र उसले पक्कै पनि यसलाई माया गर्नेछ
नतालिया, मलाई वास्तवमै थाहा छैन, क्यारफोरको डाइट सेक्सनमा हेर्नुहोस्, वा गउरमेट पसलहरूमा, त्यहाँ कोही छन् कि भनेर हेर्न…।
इरेन, मँ इस्पेरान्जा हुँ, मैले धेरै चोटि यो विधि बनाइसकेको छु, यो एकदम राम्रो छ, केवल भिन्नता भनेको यो हो कि म यसलाई कति मोटो चाहान्छु, मैले एउटा खाम वा दुई दही राख्छु, तर स्वाद अझै पनि उस्तै स्वादिष्ट हुन्छ म कसरी तपाईंको अधिक रेसिपीहरू पाउन सक्छु।
कति राम्रो एस्पेरान्जा, तिमीलाई थाहा छैन म कती खुशी छु। दहीको बारेमा कस्तो राम्रो जानकारी, धेरै धेरै धन्यबाद! यदि तपाईं मेरो धेरै व्यंजनहरू चाहनुहुन्छ भने, म अधिक कम्तिमा2रेसिपीहरू यो ब्लगमा प्रकाशित गर्दछु र मसँग मेरो आफ्नै ब्लग पनि हुन्छ, यद्यपि यो थर्मोमिक्सको लागि मात्र होइन, तर मसँग परम्परागत खाना पनि छ। म तपाईंलाई लिंक छोड्दछु: http://www.saborimpresion.blogspot.com मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ!!
अहिले मँ तपाईंको ब्ल्गमा जान्छु र कुराको अलि कडल भएको कारण मैले पहिले नै घर, क्यास्टर्ड्स, कस्टर्ड्स र जन्मदिनको केकहरू सबै बनाएको छु, म अब एउटा पनि खरीद गर्दिनँ र तिनीहरूलाई धेरै मनपर्‍यो। रेसिपीहरूका लागि धन्यवाद।
म तपाईंको फ्लेवरप्रिन्ट झोलामा छिरेकी छु र मलाई कसरी नुस्खामा टिप्पणी गर्ने थाहा छैन, मैले मह र चामलको साथ कुखुराको स्तन बनाएँ, स्वादिष्ट।
यो मैले पहिलो पटक गरें र यो एकदम राम्रो भयो! सबैले यसलाई मन पराए! केवल जटिलता भनेको कुकिज अलि बढ्यो, तर अन्यथा, उत्तम!
नमस्ते सारा! बधाई छ किनकि यो सजीलो मिठाई होईन। म धेरै खुशी छु कि यो तपाईको लागी राम्रो भयो र तपाईले यो मनपराउनु भयो। कहिलेकाँही कुरा मलाई पनि हुन्छ र म किन कारण पत्ता लगाउन सक्षम भएन ... मलाई लाग्छ यो किनभने यो क्रीम धेरै तातो छ… तर म निश्चित रूपमा भन्न सक्दिन। एक ठूलो चुम्बन र हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद!
मलाई यो मिठाई कोलम्बियामा धेरै पहिले थाहा थियो, जहाँबाट मलाई लाग्छ कि यो उत्पत्ति भएको हो ... यद्यपि यो मूलको अनुमान हो जहाँ अन्य सामग्रीहरू बीचको महत्त्वपूर्ण कुकीहरू "ड्यूकल" र बनाइएका तहहरू हुन्।
लेसलाई जवाफ दिनुहोस्
हाई लेस, मेरो एक कोलम्बियाली मित्रले मलाई यो सिकायो ... त्यसैले हुनसक्छ यो त्यहाँबाट छ। वास्तवमा, उनले यसलाई डुकल कुकिजको साथ तयार गरेकी थिई, तर हामीले यस विधिलाई यहाँ फेला पार्न सकिने सामग्रीहरूमा अनुकूलन गर्नै पर्दछ, र यी कुकीज स्पेनको सबै भागहरूमा उपलब्ध छैनन्। तपाईको टिप्पणीको लागि धेरै धन्यबाद, तपाईलाई यो मन परेकोमा म धेरै खुशी छु। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद !! मलाई ठेठ कोलम्बियाली रेसिपी तयार गर्ने दिमागमा मेरो मन छ, जुन उनले मलाई सिकाएकी थिई, त्यसैले तपाईं मलाई थर्मामिक्स र स्पेनिश सामग्रीहरूको अनुकूलनको बारेमा बताउनुहुनेछ। अंगालो!
डेभिड एन्टोनियो भन्यो
मैले भर्खरै यो मिठाईको स्वाद लिएको छु र म शब्दहरू बिना â € ˜ दर्शनीय, उदात्त, जबरदस्त, â€ ¦..â € ™ मात्र भन्न सक्छु।
थप रूपमा, मैले सबै चीजहरू हल्का सामग्रीहरूसँग बनाएको छु र यसले यसको स्वादलाई कम गर्दैन। Tb कतै मैले घुलनशील कफी छर्केको छु र यो "tiramisÃ¹" को स्पर्श मात्र रहन्छ।
यस नुस्खाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद, म अरूलाई प्रोत्साहन दिन जारी राख्छु। पक्कै चकलेट संग
डेभिड एन्टोनियोलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंको सन्देश डेभिड कस्तो रमाईलो छ। म तपाईंलाई धेरै यति मन पराउँछु खुशी छु। र सबै परिमार्जनहरू तपाईंले ध्वनिलाग्दो बनाउनुभएको छ 🙂 सत्य यो हो कि यो मिठाई एक सुरक्षित शर्त हो। जब म यो गर्छु, यो पक्का एक निश्चित जीत हो, दुवैको लागि सबैभन्दा मीठा र कमसेकम। हामीलाई लेख्न र हाम्रा व्यंजनहरु बनाउनु भएकोमा धन्यवाद! अंगालो
सिजन गरिएको बीफ एन्ट्रेकोट, रोजमेरी ईवीओओ र घरेलु लसुन र चाइभ्स मेयोनेजसँग ह्यासलब्याक आलु